Homeराष्ट्रिय खबरभारतले सीमा मि,च्दा मधेशवादी नेताहरु भू,मिगत !
काठमाडौं । मुलुक सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रता र,क्षाको कठिन मोडमा आइपुगेको छ । नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउँदै भारतले नेपालको सीमा अ,तिक्रमणको चरम विन्दुमा आइपुगेको छ ।
२०७२ सालमा चीनसँग भएको द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार भारतले तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जाने गरी नेपालको भूमि अ,तिक्रमण गरेर बाटो बनाएको छ । गत शुक्रबार भारतले सो बाटोको उ,द्घाटन गरेको छ । तर, यसबारे राजनीतिक दलका नेताहरु सबै ठाउँमा उ,भिएर सामना गर्नुपर्नेमा मधेशवादी नेताहरुको नामले चिनिने महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादवहरु भने मौन छन् ।
आफ्नो पहिचान र अधिकारको नाममा सीमा नाका बन्द हुने गरी आन्दोलन गरेका उनीहरु अहिले मुलुकको सीमा मि,चिँदा बोलेका छैनन् । संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दाको बखत रक्सौल–वीरगञ्जको दशगजा क्षेत्रमा पाल टाँगेर आफ्नो पहिचान र अधिकारको लागि भन्दै उनीहरुले आ,न्दोलन गरेका थिए । उनीहरुको आ,न्दोलनलाई देखाएर भारतले नेपालमाथि ना,काबन्दी लगाएको थियो ।
तर, मुलुकमा नाकाबन्दी हुने गरी आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलन गरेका ठाकुर, यादव, महतोलगायतका मधेशवादी दलका नेताहरुको चिनिएकाहरु अहिले भारतले नेपाली भूमि मि,च्दा मौन बसेका छन् ।
२०७२ सालमा मधेश आ,न्दोलन गर्दा फरक फरक पार्टीबाट राजनीति गरेका नेताहरु अहिले एउटै पार्टीमा रहेका छन् । जसमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पार्टी पनि एकीकरण भएको छ । हालै सबै पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरिएको छ । डा. भट्टराईले भारतले सीमा मिचेकोबारे विरोध जनाएका छन् । तर, यसलाई दलको तर्फबाट हो वा डा. भट्टराईको व्यक्तिगत धारण हो भन्ने प्रष्ट्याएका छैनन् । साथै जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सामान्य प्रेस विज्ञप्ति भने जारी गरिएकाे छ ।
पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका उपेन्द्र यादवले भारतले नेपालको लिम्पियाधुराको भूमि अ,तिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेको विषयमा मौनता साँधेर बसेका छन् । देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डमाथि प्रहार गर्ने भारतको कदमको वि,रोध गर्न आँट उनीहरुले देखाउन सकेका छैनन् ।
नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव जमाउँदै आएको भारतको कदमप्रति अक्सर नेपाली राजनीतिज्ञले विरोध जनाउन सक्दैनन् । तर, मुलुकको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने भारत र चीनको कदमप्रति सबै राजनीतिज्ञ र जनताहरुले मिलेर सामना गर्नुपर्नेमा उनीहरुले मौ,नता साँधेर बसेका छन् ।
जसले एसएसबीको ध,म्की खाएर पनि जोगाई रहेका छन् पुस्तौंदेखि नेपाली पिलर